Talooyin ku saabsan Kaydinta Lacagta Safarka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » News » Talooyin ku saabsan Kaydinta Lacagta Safarka
Boostada martida • News • Hadalka Dalxiiska • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Dad badan ayaa doonaya inay arkaan inta badan adduunka intii suurtagal ah ka hor intaanay gaboobin si ay u safraan.
Ka soo qaadista naftaada dhaqamada cusub iyo hareeraha ilaa aad arkayso astaamo qurux badan, faa iidooyin badan ayaa ku jira safarka. Marka maxaad u diidi weyday?
Hagaag, maahan waxa ugu jaban adduunka. Inta udhaxeysa duulimaadyadaada, hoygaaga, iyo kharashyada guud, runti maahan wax aad ku qaban karto mushaharka toddobaad.
Laakiin caadooyin wanaagsan, ballanqaad, iyo feker xeel dheer, keydinta lacag aad ugu safartid dibadda aad bay runtii u fududaan kartaa.
La Soco Biilashaada
Biilashaada korantada ayaa run ahaantii ka soo saari kara qaybo waaweyn jeebkaaga. Nasiib wanaagse, waxaa jira siyaabo aad u yarayn karto xoogaa. Waxaad ku bilaabi kartaa naftaada adoo kaliya ku dhaqangelinaya caadooyinka qaarkood qaab nololeedkaaga. Kuwani waa waxyaabo fudud sida furitaanka daaqadda iyada oo ka soo horjeedda adeegsiga qaboojiyaha, helitaanka qubaysyo dhakhso badan, ama laydhadhka la demiyo illaa aad dhab ahaan uga baahatid. Kuwani uma muuqan karaan kuwo lacag badan badbaadinaya, laakiin waqti ka dib waxaad ku arki doontaa faraq biilashaada.
Waxaad sidoo kale dhaqan gelin ku samayn kartaa meheraddaada. Wixii dhimis dheeraad ah, waad booqan kartaa Iibiyaha Adeegga. Halkan waxaad ka heli kartaa sicir biilashaada ah si aad runtii ugu hesho lacagtaada.
Ku taagnow oo joogso
Rome lama dhisin maalin, taasoo la micno ah adiguna ma awoodi doontid inaad keydiso si aad maalin ugu aragtid. Waxaad ubaahantahay dulqaad si aad uhesho qadar lacag ah. Waa maalin kasta, toddobaad kasta wax. Keydinta maahan wax aad xusuusan karto bishiiba hal mar oo aad filayso inaad meel kasta la tagtid. Go'aanno fiican ka gaadho kharashkaaga. Tani waxay hoos u dhigeysaa tayada warqaddaada musqusha dhowr bilood ama iibinta qaar ka mid ah waxyaabaha aan loo baahnayn ee uun boodhka ku ridaya guriga. Haddii aad ku dhegi kartid wakhti macquul ah, waxaad ku jiri doontaa diyaaraddaas waqtiga noloshaada.
Daawo Waxa Aad Cunayso
Cunnadu waa qaali, gaar ahaan marka aanad adigu samaysan. Markaad maalin xun ku haysato shaqada, cunno weyn oo kulul waxay umuuqataa mid hagaagsan, sax? Sidoo kale waa qaali marka la barbar dhigo sandwich ham oo aad ku sameyn karto guriga. Xitaa waxaad kuheli kartaa gaar ahaan hal abuurka qadadaada guriga. Tani waxay kaa hor istaageysaa inaad hesho cunnooyinkaas kulul ee aad maalin walba u iibsato qadadaada. Ka fikir sidan haddii aad qarashgareysid £ 10 maalintii qadada adoo shaqeynaya shan maalmood usbuucii, waxaad keydin doontaa £ 200 bishii.
Kafee waa mid kale oo aan dareemeyno inuu lagama maarmaan u yahay nolol maalmeedkeena. Waxay na siinaysaa laad, iyo sidoo kale inaan yeelanno qaybo bulshada ka mid ah. Laakiin miyaad runtii u baahan tahay inaad intaas in ka badan ku qarash gareyso kafeegaaga? Kafee weyn oo qurxoon oo laga helo Starbucks ayaa laga yaabaa inuu duufsado, laakiin runti ma wax badan baa ka fiican kafeega £ 2 ee aad heli karto? Markaa haddii aadan gebi ahaanba goyn karin, ugu yaraan fiiri inaad yareyso qarashka kafeega.
Dalxiiska Kerala: Nadiifi Wabiga Chaliyar Paddle Hadda
Lubnaan ayaa mugdi gashay ka dib markii korontadii dhammaatay
Folkaanaha Japan ayaa qarxaya isagoo dambasyo mayl cirka cirka u galay
IceCure Medical waxay gashay qaybinta hore ...
Dalxiiska, Isbedelka Cimilada, Eber Zero: Sacuudi ...
Dalxiiska Seychelles iyo Emirates Airlines waxay martigeliyaan Warbaahinta GCC
Duulimaadyada ka socda Doha, Qatar ilaa Sofia, Bulgaria ayaa calaamad u ah 10 ...
Xusuusta Cuntada Cusub: Calaamadda Charcuterie Fortin Salami
Hawaii 6.1 Dhulgariir ayaa laga dareemay dhammaan Jasiiradaha
IATA Waxay Bilowday Tababar Waara Deegaanka ...
St. Regis San Francisco wuxuu Magacaabay Maareeyaha Guud ee Cusub
Diyaaradda Condor ee Jarmalka ayaa Casriyeysay Maraakiib ay la socdaan 16 cusub ...
Gaadiidka Rakaabka ee Garoomada Diyaaradaha ee Ireland oo kor u kacay 230%
Dukaanka dahabka ee Bulgari ee Paris ayaa tirtiray million 10 milyan
Kolombiya Shiinaha ayaa ka furtay cusbitaal saddexaad oo cusub uguna weyn...
Ruushka ayaa amar ku bixiyay 'usbuuca aan shaqeynin' ee qaranka sida COVID-19 ...
Duulimaadka Hindiya: Diyaaradaha Cusub ee Horizon
Socdaalka Mareykanka: Maskaxda federaalku waajibaadka kordhinta waa muhiim
Isku -darka safarka iyo shaqada fog -fog waa isbeddel sii kordhaya